Shirka Gollaha Dhaqaalaha Qaranka oo Muqdisho lagu daah furay
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta daah furay Madasha Siyaasada Dhaqaalaha Qaranka oo ay ka qeyb galayaan Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya, Ganacsato, Xubno ka socda Jaamacadaha Dalka iyo Wakiilo ka socda Beesha Caalamka.
Golaha Dhaqaalaha Qaranka ayaa soo bandhigay Daraasado ku aadan halka uu marayo dhaqaalaha dalka xiligan iyo sidii loo jiheyn lahaa, iyadoo Wadajir la iskaaga kaashanayo sidii loo hormarin lahaa ilaha Dhaqaalaha loogana gudbo Waxyaabaha caqabadaha ee hortaagan hormarka Dhaqaalaha Dalka.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka Dalka ayaa furitaanka shirkan ka sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay xoogga saartay sidii dhaqaalaha dalka loo kobcin lahaa, iyadoo Xukuumadda Soomaaliya ay sameysay isku tashi.
Madasha Siyaasadda Dhaqaalaha Qaranka ayaa si gaara diiradda u saareysa Qodobo ay ka mid yihiin Kobaca Dhaqaalaha, Hanaanka loo hirgalin karo, Maalgahshiga dalka, La dagaalanka Musuq maasuqa iyo Sidii looga qeyb qaadan lahaa hindisahaasi.
Kadib 27 sano, Dekadda Muqdisho oo shaqeynaysa xilliga Habeenkii [Sawirro]
Soomaliya 11.08.2018. 22:53
Shirakad laga leeyahay Turkiga ayaa maamusha Dekedda taasoo la sheegay inay...
Shirka caalami ah oo ka dhacay Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 06.06.2018. 23:33
Wafdi ka socda Soomaaliya oo la kulmay madaxda sare ee India [Sawirro]
Soomaliya 11.03.2018. 11:45
Mahdi oo Soomaaliya ku matalay Shir madaxeedka Midowga Africa
War Saxaafaded 17.11.2018. 21:06
Somalia oo raadineysa inay dib u hantido doorkeeda Midowga Afrika
Soomaliya 20.11.2018. 10:12
Baarlamanka Puntland oo ansixiyay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah [Daawo]
Puntland 09.02.2019. 19:23
Kenya oo mas'uuliyiin ka tirsan DF u diiday in ay galaan Nairobi 20.05.2019. 22:21
Madaxweynaha Puntland oo ku wajahan Shiinaha iyo ujeedka socdaalka 20.05.2019. 22:14
Dabley weerartay makhaaxi ku taala Brazil oo dishay 11 qof 20.05.2019. 22:04
Deni: Puntland ma xukumi doono qof meel kale ka yimaada 20.05.2019. 17:05
Deni oo kormeeray qalabka lagu dhisayo dekedda Garacad 20.05.2019. 15:48
Sharciga Batroolka oo la ansixiyey xilli uu khilaaf ka taagan yahay 20.05.2019. 12:56